आइतबार अगस्त 29, 2021 |
आइतबार अगस्त 29, 2021
विषय — विषय- ख्रीष्ट येशू
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: 1 तिमोथी2: 5
“"परमेश्वर एकमात्र हुनुहुन्छ अनि मानिसहरूको उहाँकहाँ पुग्ने बाटो पनि एउटै छ। त्यो बाटो येशू ख्रीष्ट मार्फत हो, जो एकजना मानिस पनि हुनुहुन्छ।"”
उत्तरदायी पढाइ: यूहन्ना 1 : 6-13, 16, 17
1. यशैया 9: 2, 6, 7
2. मत्ती 4: 23
5. यूहन्ना4: 48 (येशूलाई)
48 तब येशूले भन्नुभयो
6. यूहन्ना 5: 19 (साँच्चै)-21, 26, 30
19 तर येशूले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँचो भन्छु। पुत्रले एक्लै केही गर्न सक्तैन। पिताले गरेको कामहरू देखे पछि मात्र पुत्रले त्यसै गर्दछ। पिताले जे गर्दछ पुत्रले त्यही गर्दछ।
30 म एकलै केही र्गदिनँ। म परमेश्वरबाट जस्तो सुन्छु त्यही प्रकारले न्याय गर्छु। यसैले मेरो निर्णय ठीक हुन्छ। किन? किनभने म आफैलाइ खुशी पार्ने कोशिश र्गदिन। तर म उहाँलाई खुशी पार्न चाहन्छु जसले मलाई पठाउनु भयो।
7. यूहन्ना 8 : 29
29 परमेश्वर जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँ मसंग हुनुहुन्छ। म सधैं त्यही कुरा गर्दछु जसले उहाँलाई खुशी दिँदछ। यसैले उहाँले मात्र मलाई एकलै छोडनु भएन।
8. यूहन्ना 10 : 14-16
14 म असल गोठालो हुँ, र मेरो भेडा जान्दछु, र मेरो बारेमा जान्दछु।
15 जसरी बुबाले मलाई चिन्नुहुन्छ, त्यसरी नै म पितालाई चिन्छु: र म भेडाको लागी आफ्नो ज्यान दिन्छु।
9. यूहन्ना 14 : 8-12
8 फिलिपले येशूलाई भने, प्रभु, हामीलाई पिता देखाइदिनुहवस्। त्यही हामीलाई पर्याप्त हुनेछ।
9 येशूले जवाफ दिनु भयो, फिलिप धेरै समयदेखि म तिमीहरूसंगै छु र पनि मलाई चिन्दिनौ भन्छौ? जसले मलाई देखेकोछ उसले मेरो पितालाई पनि देखेकोछ। यसर्थ तिमी कसरी भन्छौ, हामीलाई पिता देखाउनु होस्?
10. यूहन्ना3: 16, 17
11. यूहन्ना 17 : 1-3
1. 332 :9(ख्रीष्ट)-17, 19 (येशू)-22, 23 (येशू)-26, 29-2
ख्रीष्ट साँचो विचार राम्रो आवाज उठाउनुहुन्छ, भगवान बाट दिव्य सन्देश मानव चेतना बोल्ने मानिसहरु लाई। ख्रीष्ट निराकार, आध्यात्मिक, - हो, ईश्वरीय छवि र समानता हो, इन्द्रियहरुको भ्रम हटाउने; बाटो, सत्य, र जीवन, बिरामीहरुलाई निको पार्ने र दुष्टहरुलाई बाहिर निकाल्ने, पाप, रोग, र मृत्यु लाई नष्ट गर्ने। जस्तै पावल भन्छन्: "त्यहाँ एक भगवान हुनुहुन्छ, र भगवान र मानिसहरु को बीच एक मध्यस्थ, मानिस ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ।"
येशू ख्रीष्ट देखाउनुभयो; उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो कि ख्रीष्ट ईश्वरको ईश्वरीय विचार हो - पवित्र आत्मा, वा सान्त्वनादाता, ईश्वरीय सिद्धान्त, प्रेम, र सबै सत्य मा नेतृत्व प्रकट।
येशू एक कन्या को छोरा थियो। उहाँ परमेश्वरको वचन बोल्न र मानवता को यस्तो रूप मा नश्वरहरु लाई देखाउन को लागी नियुक्त गरीएको थियो जसरी उनीहरु बुझ्न र बुझ्न सक्थे। ... उहाँले देवीत्व को एक उच्चतम प्रकार, जो एक देहली रूप त्यो उमेर मा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ व्यक्त गर्नुभयो। वास्तविक र आदर्श मानिस मा शारीरिक तत्व प्रवेश गर्न सक्दैन। यस प्रकार यो हो कि ख्रीष्ट संयोग, वा आध्यात्मिक सम्झौता, भगवान र उसको छवि मा मानिस को बीच चित्रण गर्दछ।
2. 333 : 8 (ख्रीष्ट)-9
... ख्रीष्ट येशू को ईश्वरीय शीर्षक को रूप मा धेरै एक नाम होइन।
येशूले आफ्नो चर्च स्थापना गर्नुभयो र ख्रीष्ट-उपचार को एक आध्यात्मिक आधार मा आफ्नो मिशन बनाए। उहाँले आफ्ना अनुयायीहरुलाई सिकाउनुभयो कि उनको धर्ममा एक ईश्वरीय सिद्धान्त छ, जसले त्रुटि निकाल्छ र बिरामी र पाप दुबैलाई निको पार्छ। उनले कुनै बुद्धि, कार्य, र भगवान बाट अलग जीवन दाबी गरे। सतावटको बावजुद यो उसलाई ल्याईयो, उसले आफ्नो ईश्वरीय शक्तिको प्रयोग गरी दुबैलाई शारीरिक र आध्यात्मिक रूपमा बचाउन।
येशूले प्रदर्शन गरेर के भन्नुभयो त्यो स्थापित गर्नुभयो, यस प्रकार आफ्नो शब्दहरु भन्दा उच्च महत्व को उनको कार्यहरु बनाउनु भयो। उहाँले जे सिकाउनुभयो त्यो प्रमाणित गर्नुभयो। यो ईसाई धर्म को विज्ञान हो। येशूले सिद्धान्त साबित गर्नुभयो, जसले बिरामीलाई निको पार्छ र गल्ती बाहिर निकाल्छ, ईश्वरीय हुन। केहि, तथापि, बाहेक, उहाँका विद्यार्थीहरु लाई कम से कम उनको शिक्षाहरु र उनीहरुको गौरवशाली प्रमाणहरु मा बुझिएको छ, - अर्थात्, कि जीवन, सत्य, र प्रेम (यो अज्ञात विज्ञान को सिद्धान्त) सबै त्रुटि, दुष्ट, रोग, र मृत्यु नष्ट।
न त उत्पत्ति, चरित्र, न त येशू को काम सामान्यतया बुझिएको थियो। उसको स्वभाव को एक घटक घटक भौतिक संसार मापन सही छैन। उहाँको धार्मिकता र पवित्रताले पनि मानिसहरुलाई यसो भन्नबाट रोक्न सकेन: ऊ एक खाद्यान्न र अशुद्धको साथी हो, र बेलजेबब उसको संरक्षक हो।
येशू सिद्ध मानिस को सर्वोच्च मानव अवधारणा थियो। उहाँ ख्रीष्ट, मसीहा, बाट अविभाज्य हुनुहुन्थ्यो - शरीर बाहिर भगवान को ईश्वरीय विचार। यसले येशूलाई मामिलामा आफ्नो नियन्त्रण देखाउन सक्षम बनायो। एन्जिल्स पुरानो बुद्धिमानहरुलाई यो दोहोरो देखा पर्ने घोषणा गरीयो, र स्वर्गदूतहरु यो कानाफूसी, विश्वास को माध्यम बाट, हरेक युग मा भोकाएको हृदयमा।
"दु: ख को मानिस" सबै भन्दा राम्रो भौतिक जीवन र बुद्धिमत्ता को शून्यता र सबै समावेशी भगवान को शक्तिशाली वास्तविकता, राम्रो बुझ्यो। यी मन-उपचार, वा क्रिश्चियन विज्ञान को दुई कार्डिनल बिन्दुहरु थिए, जो उनलाई प्रेम संग सशस्त्र। ईश्वरको उच्चतम पार्थिव प्रतिनिधि, ईश्वरीय शक्ति प्रतिबिम्बित गर्ने मानव क्षमता को बारे मा बोल्दै, उहाँका चेलाहरु लाई भविष्यवाणी गरी, आफ्नो दिन को लागी मात्र नभई सधैं को लागी बोल्दै: "जसले मलाई विश्वास गर्दछ, म जे गर्छु, उसले पनि गर्छ; " र "यी संकेतहरु उनीहरुलाई विश्वास गर्नेहरुको पछि लाग्नेछन्।"
8. 146 :2(को)-12
प्राचीन ईसाईहरु निको पार्ने थिए। ईसाई धर्मको यो तत्व किन हराएको छ? किनकि हाम्रो धर्म को प्रणालीहरु कम या ज्यादा हाम्रो चिकित्सा प्रणाली द्वारा शासित छन्। पहिलो मूर्तिपूजा पदार्थ मा विश्वास थियो। स्कूलहरु लाई देवी मा विश्वास को सट्टा मा औषधि को फैशन मा विश्वास प्रदान गरिएको छ। आफ्नो बिबाद लाई नष्ट गर्न मा भरोसा गरेर, स्वास्थ्य र सद्भाव बलिदान गरिएको छ। यस्तो प्रणाली आध्यात्मिक शक्ति को जीवन शक्ति को बाँझो हो, जसद्वारा भौतिक भावना विज्ञान को सेवक बनाइन्छ र धर्म ख्रीष्ट जस्तै बन्छ।
ख्रीष्ट, भगवान को आध्यात्मिक वा साँचो विचार को रूप मा, अब पुरानो को रूप मा आउँछ, गरीबहरुलाई सुसमाचार प्रचार गर्न, बिरामीहरुलाई निको पार्ने, र दुष्टहरुलाई बाहिर निकाल्ने। के यो त्रुटि हो जुन ईसाई धर्म को एक आवश्यक तत्व, - अर्थात्, अपोस्टोलिक, ईश्वरीय उपचार को पुनर्स्थापना हो? छैन; यो ईसाई धर्म को विज्ञान हो जो यसलाई पुनर्स्थापित गरीरहेको छ, र अन्धकार मा उज्यालो प्रकाश हो, जुन अन्धकारले बुझ्दैन।
उहाँको शिक्षा र उदाहरण पछ्याउन को को तयार छ? सबै चाँडै वा पछि ख्रीष्ट मा आफैं रोप्नु पर्छ, भगवान को साँचो विचार।
गुरुले भन्नुभयो, "कोहि पनी पिताकहाँ आउँदैनन् [हुनुको ईश्वरीय सिद्धान्त] म बाट मात्र," ख्रीष्ट, जीवन, सत्य, प्रेम; किनकि ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ, "म बाटो हुँ।" शारीरिक कारण यो मूल मान्छे, येशू द्वारा पहिलो देखि अन्तिम सम्म अलग राखिएको थियो। उहाँलाई थाहा थियो कि ईश्वरीय सिद्धान्त, प्रेम, सृष्टि गर्दछ र सबै वास्तविक छ कि शासन गर्दछ।
येशूले विज्ञानमा सिद्ध मानिसलाई देख्नुभयो, जो उहाँलाई देखा पर्नुभयो जहाँ पाप नश्वर मानिस नश्वर देखिन्छ। यो सिद्ध मानिस मा मुक्तिदाता परमेश्वरको आफ्नै समानता देखे, र मानिस को यो सही दृष्टिकोण बिरामी निको भयो। यसरी येशूले सिकाउनुभयो कि परमेश्वरको राज्य अक्षुण्ण, सार्वभौमिक छ, र त्यो मानिस शुद्ध र पवित्र छ।
ईश्वरीय प्रेम सधैं मिलेको छ र सधैं हरेक मानव आवश्यकता पूरा हुनेछ। यो कल्पना गर्न को लागी राम्रो छैन कि येशूले केवल एक चयन संख्या वा समय को एक सीमित अवधिको लागी निको पार्ने ईश्वरीय शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो, किनकि सबै मानवजाति र हरेक घण्टामा, ईश्वरीय प्रेमले सबै राम्रो आपूर्ति गर्दछ।
हाम्रा मालिकले भूतहरु (दुष्टहरु) लाई बाहिर निकाले र बिरामीहरुलाई निको पारे। यो उहाँका अनुयायीहरु को बारे मा पनि भनिएको छ, कि उनीहरु डर र सबै दुष्ट आफै र अरु बाट बाहिर फ्याँक्छन् र बिरामी लाई निको पार्छन्। भगवानले मानिसको माध्यमबाट बिरामीलाई निको पार्नुहुनेछ, जब पनि मानिस भगवान द्वारा शासित हुन्छ।
आध्यात्मिक विचार को प्रतिरूपण हाम्रो मास्टर को पार्थिव जीवन मा एक संक्षिप्त इतिहास थियो; तर "उहाँको राज्य को कुनै अन्त्य हुनेछैन," ख्रीष्ट को लागी, भगवान को विचार, अन्तत सबै राष्ट्रहरु र जनताहरु लाई शासन गर्दछ - अनिवार्य रूप मा, अन्तत - ईश्वरीय विज्ञान संग।